Global Voices teny Malagasy · 21 Jolay 2019
21 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 21 Jolay 2019
Mediam-bahoaka21 Jolay 2019
Fantaro i María Angélica Marín, mpandika teny sady mpanoratra ato amin'ny GV ary ankehitriny monina any Santiago, Shily.
Ny Trackback tao amin'ny bilaogiko boliviàna
Toy izay no nahatonga ahy lasa ho mpanoratra ho an'ny GV sy ny làlana nitondrany ahy. Arahaba nahatratra ny faha-10 taona, GV!
Fanavaozana ny fango RisingVoices
Blaogim-Piarahamonina GV21 Jolay 2019
Raha sady irianay ny hampiasa karazany avy amin'ilay fango tranainy (adinkra amantarana ny GV miakatra ery amin'ny faravodilanitra toy ny masoandro), dia tianay ihany koa ny hitrandraka zotra vaovao tanteraka mba hahitàna raha toa misy tsaratsara kokoa ho an'ny maso ka afaka mandeha samirery.
"Raha tsy noho ny Global Voices, tsy ho nifandray isika." - hoy i Subhashish Panigrahi
5 taona niarahana tamin'ny GV
Nahatsapa ho maivamaivana handray anjara ao anatin'ny GV araka ny fahafahako sy izay hetahetako: Ady amin'ny fanavakavahana, ho an'ny zon'ireo LGBT, mba hisian'ny politika andraisan'ny rehetra anjara misimisy kokoa, ary fomba fijey manaraka vaninandro ananan'i Eorôpa momba an'i Brezila. ..Tiako ireo mpiray tanindrazana amiko mba hanana fomba fijery hafa!!
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2014) Araka izay efa ahazoanareo sary an-tsaina azy, tena rempotra be mihitsy aho izao amin'ny asako ikendreko hanentana ho fampitomboana ny fahatongavantsain'ireo Gineàna bilaogera hafa amin'ny zavamisy sy ny tena maha-saropady ny Ebola. Noho izay indrindra, tsy hanao afa-tsy ny handika sy hametaka hafatra...
Lohataona : Ny nahasarihan'ny arabo ny saiko
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2014) Somary hafahafa ihany ny namaky imailaka iray nanasa ahy hanoratra zavatra momba izay nihaonako voalohany tamin'ny GV. Hafahafa noho ny antony ara-potoana. Vao omaly monja, ary tampoka teo, mbola nikatro-doha aho, niezaka ny nitadidy ny fomba nahafantarako ny fisian'ny GV. Tena tsy vitako,...
Maninona aho no mandika ho an'ny GV ?
vondrom-piarahamonina21 Jolay 2019
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2014) Ao anatin'ny fankalazàna ny Andron'ireo Mpirotsaka an-tsitrapo, mandefa ity fitsapankevitra ity ny GV ho an'ny vondrom-piarahamonina Lingua. Angamba aho amin'izao fotoana izao miasa ho an'ny GV, saingy tany am-boalohany dia nanjohy ny GV nanao ny asan'ny mpandika lahatsoratra niasa an-tsitrapo. Misy fanontaninaa telo...
Victoria Espinosa: Faraveloma ho an'ilay Puerto Rikàna mpilalao teatira, tsy nahalala sasatra
Amerika Latina21 Jolay 2019
Mahatsiaro ireo lova navelan'ilay artistra fantadaza ry zareo Puerto Rikàna